Maxkamada Ciidamada Qalabka sida oo Xabsi daa’in ku xukuntay Taliyihii ciidanka Asluubta. – Radio Daljir
Diseembar 8, 2012 9:18 b 0
Muqdisho, Dec 8, Maxkamadda Ciidamada qalabka sida ee Dawlada Federalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta xabsi daa’in ku xukuntay Taliyihii ciidamada Asluubta Soomaaliya Cabdi Maxamed Ismaaciil oo ay ku eedaysan qaran dumis.
Taliyihii hore ee ciidamada Asluubta oo ayaan gacanta lagu hayn waxaana wararku sheegayaan inuu ka baxsaday Muqdisho iyadoo loo badinayo inuu ku sugan yahay deegaanada maamulka Somaliland ka arimiyo.
Waxaa lagu eedeeyey inuu xabsiga magaalada Muqdisho kasii daayey rag ka tirsanaa Kooxda Al-shabaab isagoo sidoo kale derojo ciidan u labisey sirdoon u shaqaynayey Kooxda Al-shabaab.
Sidoo kale Maxkamadda ayaa xabsi shan sano ah ku xukuntay agaasimihii Garsoorka Maxkamadda Ciidamada oo isna lagu eedeeyay inuu wax ka fududeeyay falkii lagu sii daayay horjoogeyaal ka tirsanaa al-Shabab oo lagu xiray xabsiga dhexe.
Xukunkan ay maanta ridey Maxkamada Ciidamada qalabka sida ee Dawlada Federalka ah ee Soomaaliya ayaa yimid xili dhowaan taliyihii ciidanka Asluubta Cabdi Maxamed Ismaaciil ‘Indhabuur’ lagu eedeeyey inuu xabsiga kasii daayey Kooxda Al-shabaab rag ka tirsanaa.